के तपाईंले स्टार वार्समा गुगलको ईस्टर अण्डा देख्नुभयो? | आईफोन समाचार
के तपाईंले स्टार वार्समा गुगलको ईस्टर अण्डा देख्नुभयो?
यस्तो देखिन्छ कि Google अधीर र उत्साहित छ एपिसोड VII को प्रीमियरको लागि प्रतीक्षा गर्दै स्टार वार्स (स्पेनमा स्टार वार्स) जो "बलको ब्यूँझदै" भन्ने नाम लिन्छ। यसको विश्व प्रीमियर र मा एक महिना भन्दा कम बाँकी छ गुगल तिनीहरूले सोचेको हुन सक्छ "हामी कसरी गाथालाई सम्मान गर्न सक्छौं?" र सिर्जना गरेको छ इस्टर अण्डा जुन वास्तविकतामा धेरै लुकेको छैन। यदि यो एक बिट लुकाइएको छ भने यो छ किनभने केही प्रयोगकर्ताहरूले गुगलमा वाक्यांश खोजी गर्दछ यदि यो कुनै खास कारणका लागि होईन, यद्यपि यो त्यहि हो।
कम्पनीलाई अब वर्णमालाको लागि के भएको छ र सुन्दर पिचाइले निर्देशन गरेको अनुसार खास खोजी त्यसरी नै देखाउनुपर्दछ जुन सागाको हरेक भागको सुरूमा क्रेडिटहरू देखा पर्दछ जुन तपाईलाई सबैले थाहा छ, यो हो पहेंलो अक्षरहरूको कालो पृष्ठभूमि क्षितिज मा गायब। तर त्यहाँ के खोज्नु पर्छ? यसले कल्पनाको एक बिट लिन्छ, तर हामी तपाईंलाई जम्प पछि सबै बताउनेछौं।
हेर्नको लागि पाठ «धेरै पहिले धेरै टाढा आकाशगंगामा»(उद्धरणहरू बिना), हामीले अल्पविराम राख्नु पर्दैन। मैले Google.com मा यो प्रयास गरेको छु, तर यो Google.es वा कुनै पनि देशको कुनै विस्तारमा पनि देखा पर्दछ। यो टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ कि यो हो IOS को लागी सफारी संग संगत, तर सबै ब्राउजरहरूमा यो समान रूपले राम्रो देखिदैन (मैले नेटिभ उबुन्टु मेटमा प्रयास गरेको छु र यो निकै नराम्रो देखिन्छ)।
यद्यपि एनिमेसन रोकिन सकिन्छ, वास्तवमा यो एक भिडियो होईन। हामी सक्छौ इशाराहरूको साथ जुम इन वा आउट गर्नुहोस् पिन्च वा फिंगरहरू फैलाउँनुहोस् र हामी एनिमेसनलाई अगाडि बढाउन वा ढिलाइ गर्न सक्दछौं औंलाको साथ माथि वा तल स्लाइडिंग गरेर। यो सामान्य खोजको रूपमा, एनिमेसन सुरू हुन्छ जब यो अन्त्यमा पुग्छ र स्क्रिनबाट हटाइन्छ जब हामी परिणाममा टच हुन्छौं। यो प्रयास गर्नुहोस् र बल तपाईं संग हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » के तपाईंले स्टार वार्समा गुगलको ईस्टर अण्डा देख्नुभयो?
9 कपालहरू भन्यो
अण्डा नयाँ होइन !!!
9Pelos लाई जवाफ दिनुहोस्
चेतावनी को लागी धन्यवाद। मैले आईप्याडको साथ लेख्न सुरू गरें र यस्तो देखिन्छ कि एप्पललाई थाहा छैन कि अण्डा कुखुराबाट आउने खाना हो। तिनीहरूले सोच्नु पर्छ यो केवल केहि यौन हो, किनकि यसले प्राय: सँधै यसलाई परिवर्तन गर्दछ: /
उत्तरहरू आईफोनमा जोडिएको पेबल प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न थाल्छन्